केन्सिंग्टन मार्केट - पुरानो र रोमान्टिक
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » समाचार » केन्सिंग्टन मार्केट - पुरानो र रोमान्टिक
अगस्ट 22, 2014
"A-goosh-ta मा भेट्न चाहानुहुन्छ?" लिभलाई सोध्यो, मेरो चचेरो भाई र कफी विजयमा साझेदार।
"A-goosh-ta?" मैले समान उच्चारणमा भने। “अब त्यहाँ एक ठाउँ छ जुन म एक समयमा गरेको थिइनँ। हो। हामी त्यहाँ भेटौं। ”
"A-goosh-टा" हो जुन हामी हाम्रा बाबुआमाले टोरोन्टोको केन्सिington्टन मार्केट कल सुनेर हुर्क्यौं। यसको मुख्य काम Augustगस्टा एभिन्यू र पोर्चुगिज भाषामा हो, “अगस्टा” “ए-गूस-ता,” हुन्छ र सम्पूर्ण बजार क्षेत्र, “ए-गूस-टा” हो।
केन्सिingtonटन बजार दक्षिणमा डुन्डस सेन्ट डब्ल्यू, उत्तरमा कलेज सेन्ट, पूर्वमा स्प्याडिना अवे। र पश्चिममा बाथर्स्ट सेन्टको बीचमा वर्ग छ। धेरै हिप, ट्रेंडी र ईलेक्टिक संग्रह कफी पसलहरू, फल स्ट्यान्ड र Bric-a-brac स्टोर अगस्ता अवेका साथ चल्छ। ऐतिहासिक भिक्टोरियन घरहरू र साना पार्कहरू अगस्टा अवेबाट फ्यानिंग सडकहरू लाईन बनाउँछन्। केन्सिington्टन मार्केट अझै एक मध्ये एक हो। टोरन्टो मा प्रसिद्ध क्षेत्रहरु। नोभेम्बर २०० In मा, यसलाई क्यानाडाको एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक साइट नामकरण गरियो।
टोरोन्टोमा आप्रवासीहरू बसोबास गर्दै यस क्षेत्र (बजार) ले आफ्नो इतिहासभरि धेरै पुनरुत्थानहरू देखेको छ। १ 1880० को दशकमा, भिक्टोरियन स्टाइल प row्क्ति घरहरू स्कटिश र आइरिश मजदुरहरूको लागि निर्माण गरिएको थियो। बीसौं शताब्दीको शुरुमा भागमा बजारलाई "यहूदी मार्केट" भनेर चिनिन थाल्यो र ens०,००० यहूदीहरू त्यहाँ 60,000० भन्दा बढी स्थानीय सभाघरहरूमा पूजा गरिरहेका थिए र केन्सि Marketटन बजार वरपर थिए। केनसिington्टन वरपरको क्षेत्र, शहर मा एक गरीब थियो।
यहूदी जनसंख्या बढी समृद्ध गाउँहरूमा बसाइँ सर्दा, एजोरस (पोर्चुगल) बाट आएका आप्रवासीहरू उनीहरूलाई "मेरो पछाडि घर" बाट खानाका सुविधाहरू ल्याउन बसाइँ सरे। पोर्चुगलबाट मसला र खाद्य छनौटहरू बेच्ने पसलहरूले यहूदी टेलरहरू र फ्युरियर्सहरूको ठाउँ लिन थाले। यसपछि क्यारिबियन र पूर्वी एशियाबाट आप्रवासीहरू आएका थिए। मध्य अमेरिका, सोमालिया, इथियोपिया, भियतनाम र अन्य विश्वव्यापी तातो ठाउँहरूबाट मानिसहरू देखापरे। चिनटाउन केन्सिingtonटनको केही पूर्वमा अवस्थित छ। यो सबै सँगै राख्नुहोस्, र आजको केन्सिंग्टन मार्केट पुरानो र नयाँको स is्ग्रह हो। हिजोको ट्रेंडको साथ हिजोका भवनहरू।
तपाईलाई जे चाहिन्छ, यो मसला, पोशाक, सरसामान, फर्निचर हुनुहोस् - तपाईलाई नाम दिनुहोस्, केन्सिंगटन मार्केटमा फेला पार्न सकिन्छ। Liv सामान पछि थियो। उनी ट्रेंन्टो टोरोन्टो नजिकैको एउटा अपस्केल शपमा सामान बोक्ने सामानको लागि १०० पैसा तिर्न तयार थिइनन्, त्यसैले हामी “A-goosh-ta” तिर लाग्यौं। यदि यो हाम्रा बाबुआमाको लागि पर्याप्त थियो भने, यो हाम्रो लागि पर्याप्त छ!
पहिले, हामीलाई कफि चाहिन्छ। हामी बाल्डविन सेन्टमा जिमीको कफीमा भेट्छौं हामी हाम्रो पेय पदार्थ किन्छौं र बाहिर घरको पछाडि ठूलो आँगन तिर लाग्छौं। यो उच्च-टेक प्रकारले भरिएको छ जुन ल्यापटप, ट्याब्लेटहरू, र सेल फोनहरूसँग सुसज्जित छ। सबै जना सूचक औंलाहरू साना कुञ्जीहरू पंचिंगमा व्यस्त छन्। मलाई विश्वास छ म कसैलाई कालो मसीले पृष्ठहरू भरिएको बाक्लो वस्तु राखिएको देख्छु। कहिलेकाँही, उसले पृष्ठ पल्टाउँदछ। के यो किताब हो? इमानदारीपूर्वक, म निश्चित हुन सक्दिन। जे भए पनि, जिमीको आँगनहरू व्यक्तिले भरिएको छ, तर कोही पनि बोल्दै छैनन्। हामी लगभग भित्री भित्र फर्कन्छौं, किनभने भगवानले निषेध गर्नुहोला, हामी कसैलाई दिक्क पार्न चाहँदैनौं।
"आउनुहोस्, पछाडि टेबल बनाऔं र हामी नरमसँग कुरा गर्नेछौं," मैले भने।
यस कार / फोटोबाट फूलहरू र जडिबुटीहरू बढ्दै छन् © मारिया जी.इट्स
यहूदी बजार दिन सर्का १ 1924 २। En.wikedia.org मार्फत
फोटो © मारिया जी। येट्स
Www.jimmyscoffee.ca मार्फत जिमीको आँगन
धेरै पोशाकहरू। यति थोरै प्रकार्यहरू / फोटो © मारिया जी Yates
जुत्ता स्वर्ग / फोटो © मारिया जी। येट्स
कला कार्य भन्छ यो सबै / फोटो © मारिया जी Yates
केन्सिंगटन मार्केट / फोटो को अधिक © मारिया जी Yates
केन्सिंग्टन मार्केट / फोटो को अधिक पनि - मारिया जी Yates
हो, केन्सिंगटन मार्केट / फोटो को एक सानो अधिक more मारिया जी Yates
र कम्तिमा होइन, केन्सिington्गटन मार्केट / फोटो of मारिया जी। येट्स अधिक
लिभले भन्यो, “त्यसो भए। हामी आँगनको पछाडि हिंड्छौं, सबैभन्दा टाढा टेबलमा हामीले भेट्न सक्छौं र कुराकानीको आवाजमा कुराकानी सुरु गर्दछौं, किनकि तपाईंलाई थाहा छ, भगवानले निषेध गर्नुहोला, हामी कसैलाई विचलित गर्न चाहँदैनौं।
एक दम्पती र उनीहरूको सानी छोरी हामीबाट तीन टेबल टाढा बसिरहेका छन्। म उनीहरूको लागि प्रायः दु: खी छु। उनीहरूले बच्चालाई सेल फोन दिए। उनीले आफ्नो अनुक्रमणिका औंलाले ठोकर दिन्छिन्। उनी चुपचाप छिन्।
कफि कप खालीसहित, हामी फेरि बजार सडकमा फर्केर अगाडि बढ्यौं - एक सय भन्दा डलरको एक टुक्रा क्यारी अन-सामानको भन्दा भ्रमपूर्ण को खोजीमा। बिभिन्न स्टोरहरूमा हेर्दै हामी सडकहरूमा घुम्न थालेपछि धेरैले हाम्रो युवावस्थाबाट सम्झनाहरू ल्याउँदछन्। हामीले सम्झेको माछा स्टोर अब एक पुरुष कपडा स्टोर हो। हिउँको र the्गको र hair्गको र with्गको सडकको नक्सा जस्तो अनुहारको साथ दफ़्तीबाट अण्डा बेच्ने महिला, स्पष्ट प्लास्टिकको कपहरूमा फलफूलको रस बिक्री गर्ने रेस्टुरेन्टको साथ प्रतिस्थापन गरिएको छ। के पहिले पेरोला डोस एकोर्स थियो, पोर्तुगाली सामग्रीमा विशेषज्ञता, अहिले पेरोला सुपरमार्केट हो, ल्याटिन अमेरिकी खानामा विशेषज्ञता। सबै परिवर्तन हुन्छ। तर केहि चीजहरू उस्तै रहन्छन्।
पुरानो कपडाको पसल, साहसी माया, १ 1980 since० देखि बजार परिदृश्यको हिस्सा भएको छ। यो अझै छ। तर सामानमा फर्कनुहोस्। डेलिसन Ave. मा Bellevue स्क्वायर पार्क देखि सडक पार Sasmar स्मार्ट पोशाक बसन्छ। यो हामी पछि पसल हो। ससमर दशकौंसम्म यस स्थानमा छ। केहि पनि यहाँ पाउन सकिन्छ। कम्बल चाहियो? यो यहाँ छ। जाडो कोट? हो। भाँडा? प्यानहरू? तपाईं शर्त। लगेज? तपाई यसलाई राम्रो विश्वास गर्नुहुन्छ! सबै आकारहरू। सबै रंगहरू। हामी उत्साहित छौं। तर त्यहाँ अझै छ।
जुत्ताहरू छन्। ती धेरै। हामी बिभिन्न शैलीहरू कोशिस गर्छौं – फ्लिप-फ्लपहरू, धावकहरू, स्यान्डलहरू, खुला खुट्टाको औंला, बन्द पैर, औंठी महिलाहरू र कुशी इनसाइडहरू र आर्कले समर्थन गर्दछ (हामीलाई यसका लागि केहि बर्ष दिनुहोस्)। हे मेरो प्यारो प्रभु। हामी जुत्ता स्वर्गमा छौं। हामी विभिन्न oe जुत्ता प्रदर्शनको वरिपरिको बाटो "ओह" र "आह" गर्दछौं। हामीले केहि किन्यौं? हुदै हैन। तर त्यो बिन्दुको छेउमा छ। कुरा के हो: हाम्रो जवानीको सम्झनाहरू जताततै छन्। यस स्टोरमा मात्र होइन तर बजार भर। र त्यो सबै महत्त्वपूर्ण छ। यो सबै यति उदासीन छ। रोमान्टिक पनि।
मानिसहरू आउँछन् र जान्छन्। सहरी क्षेत्रहरू परिवर्तन हुन्छन्। तर यस दिन, एक लामो हराएको प्रेमी जस्तै हाम्रो लागि पर्खिरहेको थियो, "A-goosh-टा।" र हामीले यसलाई खुला हतियारले अँगालेका छौं।
अद्यावधिक गर्नुहोस्: लिभ घर गई, आफ्नी छोरीलाई लिएर र दिउँसो उनीसँगै फर्कियो। तिनीहरूले सामान र जुत्ता किने।
तपाईको मनपर्ने बजार के हो?